That's so good, right?: My First Time – But Not My Last!
ငယ်ငယ်......ကျွန်တော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာကိုပဲ တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ ရပါတယ်။ နွေးထွေးတဲ့မိသားစုအိမ်ကနေ အေးဆက်စွာ ကန်ထုတ်ခံရတယ်လို့ဆိုရင် ပိုမှန်တာပေါ့။ ဘာကြောင့်လည်း......ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ဖွင့်ပြောတင်ပြမိခြင်းနဲ့ မလိမ်ညာ မိခြင်းကြောင့်....။ အဖေတို့ကို ကျွန်တော်ဟာ ဟိုမိုတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်မိတာကိုး။ အမှန်တကယ်......တကယ့်ကို ဟိုမိုဆိုတာ ဘာမှန်းမသိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ဆိုတာ ခံစားမိရပါတယ်။
ကျွန်တော့်မိဘတွေဟာ အလွန်တရာရိုးဖြောင့်သလို သဘာဝကနေသွေဖည်တဲ့ကိစ္စတွေကို လုံးဝလက်မခံ တတ်သူများပါ။ သူတို့အသည်း နှလုံးထဲမှာ တစ်ယောက်အတွက် အခန်းလွတ်မရှိဘူး နေရာမရှိပါဘူး။ "အိမ်ကနေထွက်သွား" ထွက်သွားဖို့ မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အနွေးဓာတ်ရဖို့ Jacket တစ်ထည် သာရှိတာ.....လက်တွေနွေးဖို့ လက်အိတ်မရှိ၊ နားရွက်တွေနွေးစေဖို့ ဆောင်းစရာ ဦးထုပ်နတ္ထိပါ။ အေးခဲလှတဲ့ ဆောင်းရာသီ နယ်စပ်မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ ဆောင်းရာသီ....ဒီအေးစက်စက်ရာသီဥတုကို ဘယ်လိုဖြတ် ကျော်ရမလည်း....။
အိမ်ခြေယာခြေမဲ့ တကယ့်ကိုဖြစ်ခဲ့တာပါ...လမ်းမတွေပေါ်မှာ။ အစဉ်အမြဲ မျက်စိဖွင့်နားစွင့်နေရတာဗျာ ပတ်တယောင်ရဲတွေ၊ လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးကျောင်းက ကင်းထောက်ရဲတွေ အလာကိုပေါ့။ အကျင့်ညစ်ဆိုးတဲ့ လူကြီးတစ်ချို့က မဟုတ်တရုတ်လမ်းမှားရောက် အောင်လမ်းညွှန်ကြတာ ကြုံရသလို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖို့ အလုပ်ရှာရာမှာလည်း ရရစားစားပါပဲ။ ညအခါ အနွေးဓာတ်ရဖို့ ပြဇာတ်ရုံ တွေမှာ အရိပ်ခိုတော့လည်း လူတစ်ချို့က ကျွန်တော်နဲ့ play ဖို့ကြိုးစားချင်ကြသေးတော့တာ။ သူတို့ကိုရှောင်ပြေးရင်း priest တစ်ယောက် ဆီ အကူအညီရဖို့ ချဉ်းကပ်တော့လည်း ကျွန်တော်သိရပြန်တာက သူ့အဖော်မဲ့ဖီလင်အတွက် ကျွန်တော့ဒစ်နဲ့ အရသာ ခံစားချင်ခဲ့တာကို။ ဒီလိုလမ်းပေါ်က ဘ၀တွေဟာ ကြမ်းတမ်းသလား၊ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် အတွက်တောင် မလုံချုံသလိုဘဲ။ ဒီလို...ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ဆောက်တည်ခဲ့ရသလို အပြင်လောကကြီး ကနေ ဘ၀နေနည်းပညာတွေ ရလိုက်ပါရောလေ။
ကျွန်တော် အလွန့်ကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်တဲ့ အေးစက်တဲ့ညတွေဖြတ်သန်းခဲ့ရတာကြာတော့ ဒီထက်ပိုလုံခြုံတဲ့ ဘ၀တစ်ခုရဖို့ ကြိုးစားပြီး နည်းလမ်းတွေရှာမိတာပေါ့...ဘယ်သူကကျွန်တော့်အားထားရာဖြစ်မလည်းဆိုတာ မသိခဲ့ရဘဲ။ ပြည်နယ်စောင့်ရှောက်ရေး တပ်မတော် တဲ့ .... ဟုတ်တယ်...ဒီတပ်ထဲဝင်တာကမှ နေရတာပိုကောင်း ဦးမယ်ထင်တယ်။ နယ်စပ်မြို့ကလေးဆိုတော့ အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ကြောင်း လတ်မှတ်တုရဖို့ လွယ်ကူတာ အမှန်။ စုဆောင်းရေးစခန်းမှာ ဒီလက်မှတ်ကိုပြ.....အိုကေပဲ။ My Trick worked. ကျွန်တော် ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်တစ်ခုကို training အတွက် စေလွှတ်ခံခဲ့ရတာ။
အခြေခံစစ်သင်တန်းပြီးပြန်တော့ camp သွင်းဖို့ အတွက်အဓိကစခန်းကြီးရှိ ဌာနစိတ်တစ်ခုကိုရောက်ခဲ့ရတာ စွန့်စားခန်းတစ်ခု တစ်ရပ် ပါပဲ။ အခြေခံစည်းမျဉ်းအတိုင်းပေါ့ မိမိရောက်ရှိကြောင်း Commanding Officer ဆီ သွားတွေ့အကြောင်းကြားခဲ့ရတယ်။ သူဟာ အသက် ပိုကြီးသလို အရာရာနားလည်ပေးတတ် သိတတ် သူတစ်ဦးဆိုတာအမှန်ပဲ။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ရင်း အသက်ဘယ် လောက်ရှိပြီလဲ မေးတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း လိမ်ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူသိနေမှန်းကျွန်တော်ရိပ်မိပါတယ်လေ။ တိုက်ပွဲဖြစ်ရာ တပ်စခန်းတွေဆီ ကျွန်တော့်ကိုထည့်မလွှတ်ဘဲ တပ်တွင်းရုံးမှာ စာရေးလုပ်စေခဲ့တယ်... ၈တန်းပညာ အရည်အချင်းနဲ့ စာရေးစာချီဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်က တပ်တွင်းဘ၀နဲ့အမြန်နေသားကျခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ တပ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ သလို အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေ နေသားကျအောင်ကြိုးစားနေထိုင်ခဲ့တာလည်းပါတာပေါ့။ ကျွန်တော့်အတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးဘ၀နေထိုင်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခု ရခဲ့တာပါပဲ။ နွေးထွေးတဲ့အ၀တ်တွေ အစားအသောက်ကောင်း ကောင်းတွေ ပြီးတော့နွေးထွေးတဲ့အိပ်ယာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဗျ။ ဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော် ဘာများမျှော်လင့်နိုင်မှာ ပါလဲ။ ဒီတပ်မတော်ဟာ ကျွန်တော့်အမေနဲ့အဖေဖြစ်လာခဲ့တာတော့အမှန်။ နောက်နှစ်၂၀လောက်တပ်ထဲ အချိန်ဖြုန်းပြီးရင် Master Sergeant တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနားယူမယ်လေ စစ်တပ်ကနေ။
တပ်တွင်းအားကစားရုံရဲ့ နံရံမှာ အပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်စီတွေ့ရသေးတယ်။ ဘာလုပ်ဖို့ဖောက်ထားမှန်း မသိခဲ့ပါဘူး။ အိမ်သာတက်တော့ တဖက်မှာတက်တဲ့လူတစ်ချို့က ကျွန်တော့်ဒစ်ကိုစုပ်ဖို့ တောင်းဆိုကြိုးစား ကြတယ်။ "No" လို့ပြောမိရတာပေါ့။ ကြံကြံဖန်ဖန်မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့လည်း တပ်တွင်းပါတီတစ်ခု အပြီးမှာ တွေ့ပြီးအိပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဦးဆုံးအတွေ့အကြုံ မို့ရင်ခုန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုထိရင်ထဲမှာ တစ်ခုခု ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သလားပဲ။
တနင်္ဂနွေမနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ရွှေမြို့တော်ဆီ ဘတ်စ်စီးပြီးသွားဖြစ်ခဲ့တယ် camp ကနေပေါ့။ camp ရှိရာ စိမ့်စမ်းမြို့တော်ကနေ အနီးဆုံးဆိုတဲ့မြို့ကြီးပါပဲ။ ပူနွေးသာယာတဲ့နွေဦးရာသီမှာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး နေရောင်ဖြာလို့။ ဒီမြို့မှာ ဘာမှ အထူအထွေလုပ်စရာ မရှိဘဲလာခဲ့တာပါ။ အလုပ်ခွင်က ခဏတာလေး အနားယူခွင့်ရရဆိုပြီးတော့လေ။
နေ့လည်စာစားဖို့ အချိန်ရောက်တော့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ၀င်လိုက်တာလူတွေလေ များမှများ။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်စရာတစ်နေရာ ရခဲ့လို့တော်ပါသေးရဲ့။ စားရင်းသောက်ရင်း သတိထားမိတာက ကျွန်တော့်ဘေးကထိုင်ခုံမှာ camp ကစစ်သားတစ်ယောက်ပဲ။ သူ့ကိုကျွန်တော် ရင်းရင်းနှီးနှီးမသိပါဘူး။ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း စကားမစပ်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ကြည့်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည် ဘော်ဒီက အမိုက်စားနဲ့ သူ့ပုံစံက အားကျစရာပါပဲ။
နေ့လည်စာစားပြီးတော့ မြို့အနှံ့လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ ဒီမြို့က သေနေသလိုပဲ လုပ်စရာလည်စရာဘာမှ လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။ အဲဒါနဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်စကားတွေပြောရုံပဲ လုပ်နိုင်ကြတယ်။ ဒီငနဲက ကျွန်တော့်ထက်အသက်ကြီးပုံရတယ် ၂၂ ဒါမှမဟုတ် ၂၄နှစ် လောက်ရှိမယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာလောကကြီး အကြောင်း နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိသူထင်ပါရဲ့။
လမ်းလျှောက်နေတုန်း သူဟာငွေနှင်းမှုန်မြို့တော်ကဖြစ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်စုမှာနေထိုင်ကြောင်း၊ သူဟာ Cherokee Indian တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူအဲဒီအကြောင်းပြောမှပဲ သူ့အသွင်အပြင်ဟာ Indianလူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့တူနေတာကို သတိထားမိတော့တယ်။ ကျွန်တော်က ခင်ဗျားဟာ တော်တော်ကြည့် ကောင်းတဲ့ Indian လူမျိုးတစ်ယောက်ပဲလို့ပြောလိုက်တော့ သူသဘော တကျရယ်မောနေတာ ပါးချိုင့်များ တောင်ပေါ်လို့။
မွန်းလွဲချိန်ရောက်လာတဲ့အထိ ဘာမှလုပ်စရာမယ်မယ်ရရ မရှိ။ သူငယ်ချင်းအသစ်လေးက camp ဆီကိုလမ်း လျှောက် ပြန်တော့မယ်တဲ့။ ဘာကြောင့် ဘတ်စ်ကိုမစောင့်တာလည်းဆိုတော့ လမ်းလျှောက်ချင်တယ်ပြီးတော့ အရင်တုန်းကလည်း သူဒီအတိုင်းပြန်တာ ဖြတ်လမ်း တွေကို သူသိသတဲ့။ ကျွန်တော်လည်းသူနှင့်အတူလိုက်မယ် ဆိုပြီး camp ဆီကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ သစ်ပင်လေး တွေရှိရာကနေဖြစ်သန်းလာပြီးနောက် စမ်းချောင်းလေးတွေ့တော့ အဲဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ သူကဒီစမ်းချောင်း လေးက camp ရှိရာဆီကို လမ်းပြတယ်လို့ပြောတာကိုး... သူပြောတဲ့အတိုင်း လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ သစ်ပင်တွေနဲ့ အုံ့ဆိုင်းနေတဲ့နေရာလေးတစ်ခု အမှတ်မထင်မြင်မိကြ တယ်။အရိပ်ကောင်းကောင်း ရတဲ့ အပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာ အတူထိုင်ရင်း သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်း ပြောဖြစ်ခဲကြတယ်။ သူဟာလက်ထပ်ပြီး သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကလေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ တပ်ထဲကို ဆွဲခေါ်သွင်းခံရတာဆိုပဲ။ သူ့မိန်းမကိုဘယ်လောက်လွမ်းကြောင်း တမ်းတ ကြောင်းပြောပြနေသလို တခြား အကြောင်းတွေပြောကြရင်း sex အကြောင်းစပြောဖြစ်ခဲ့ကြတော့တာ။
ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့နေရာကနေ သူ့ငပဲဖောင်းကြွနေတဲ့ နေရာစီလှမ်းမြင်နေရတယ်။ မဆိုးပါဘူး ပုံသဏ္ဍာန်လှတဲ့ အသားချောင်းကို သူပိုင်ဆိုင်သားပဲ။ ကျွန်တော်လည်း စကားတွေပြောရင်း မာတောင်စပြုလာ ပါပြီလေ။ သူဒီမြို့ကလေးကနေ လမ်းလျှောက်ပြန်လာတိုင်း ဒီသစ်ပင်အောက်မှာ အမြဲပဲအနားယူလေ့ရှိသတဲ့။ ဒီနေရာလေးဟာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ် သူလုပ်ချင်တာတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်လို့ရတယ်။ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးဒီဝန်းကျင်မှာ။ နည်းနည်းချင်း သူ့ရဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်လေးကို သိလာရိပ် မိလာ ရပြါ့ပီ။ ဒီနေရာလေးဆီ လမ်းလျှောက်လာမယ်၊ နားမယ်၊ ဂွင်းထုမယ် ပြီးတော့ camp ဆီဆက်ပြီး လျှောက်မယ်လေ။ You see, camp မှာက တစ်ယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့မရသလို ကိုယ့်ဒစ်ကို ကိုင်ပြီးဆော့ဖို့နေရာ ကလည်းအများကြီးမရှိပြန်ဘူး။ ဒီတော့ ဒီနေရာလေးကို လျှောက်လာ လိမ့်မယ် ပြီးတော့ ပြုဖွယ်ရာ ကိတ်စတွေကိုလုပ်ဆောင်မယ်ပေါ့။ ပြောသေးတယ် ဒီနေ့လည်လမ်းလျှောက်ပြန်ပြီးရင် အဲဒါလုပ်ဦးမလို့တဲ့။
သူဆင်နွှဲမယ့် လက်ကစားပွဲမှာ ကျွန်တော်လည်းနွှဲဖို့ပါဝင်မယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ "ကောင်းတာပေါ့......Jack off party ပွဲတစ်ပွဲကို နှစ်ယောက်သားကျင်းပလိုက် ကျတာပေါ့"တဲ့..ဟီး။ ကျွန်တော် ဘာမှတောင်မလုပ်ဖြစ်သေး ဘူး သူ့ပြောစကားတွေကြားနေရုံနဲ့ ရင်တွေအရမ်းခုန်နေရော။ သူ့ယူနီဖောင်းတွေ မညစ်ပေသွားစေချင်ဘူး ထင်ရဲ့။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရော သူပါ ဘောင်းဘီရှည်တွေ၊ အတွင်းခံတွေပါ ချွတ်လိုက်ကြတယ်။ မြှားနတ် မောင်ရဲ့ မြှားတံတွေအလား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချိန်ရွယ်ထားလိုက်ကြတာ တည့်တည့်မတ်မတ်။ ရင်ခုန်သံတွေ တဒုန်းဒုန်း။ I loved it. ယောက်ျားလေးနဲ့ တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြင်နေခဲ့ရတာ ကိုတော့ အကြိုက်သားပါ။ အလွန့်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ sexy Cherokee Indian stud တစ်ယောက်ပါပဲသူဟာ။
နှစ်ယောက်သားဘေးချင်းကပ်ထိုင်လိုက်ကြပြီး စက်ချုပ်သမလေးတွေအကြောင်းပြောဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီအကြောင်းပြောနေစဉ်မှာကိုပဲ သူ့ငပဲဟာ ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ မတ်မတ်လာတာကို မြင်နေရတယ်။ ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့ သူဘာကိုလိုအပ်နေတာကို အလိုလို ခံစားရမိနေသလိုပါပဲ။ စိတ်တွေထဲမှာ အရမ်းကိုဖြစ်လာမိသလို သူပေးမဲ့အကြံဥာဏ်တွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတိုင်းနွှဲဖို့ အသင့်ပါပဲလေ။ နွေးနွေးထွေးထွေး အကြင်နာစကားတွေပြော......ပြောရင်း ဦးတည်ချက်က သူ့ငပဲကို အာဘွားပေးဖို့ဆီလိုပါပဲ။
နည်းနည်းချင်းစကားတွေချွေလိုက်တာ ..။ First - သူ့ငပဲကို ခပ်ဖွဖွကိုင်ကြည့်ပါလားတဲ့။ မရဲတရဲကိုင်ကြည့် လိုက်တော့ အံ့သြစရာ....ကျွန်တော် တခြားလူရဲ့ငပဲကို ကိုယ်တွယ်ရတာကို ရင်ခုန်နေပါရော့လား။
Second - ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လို့ အထက်အောက်နည်းနည်းလှုပ်ရှားပေးဖို့ ပြောတော့လည်း ကျွန်တော်ခပ်သာသာ လုပ်ပေးမိပြန်ရော။ နူးညံ့တဲ့ ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးအစုံနဲ့ ဒီလိုလုပ်ပေးတာ သူ့အတွက်ဖီးလ်အရမ်း ကောင်းပါသတဲ့လေ။ သူဖီးလ်လာအောင် ကျွန်တော်က လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့။
Third - သူ့ငပဲပေါ်ကို တံတွေးနည်းနည်းထွေးလိုက်ပါဆိုတော့မှ သူ့ဒစ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို သေချာရှုမိတယ်။ ပန်းသွေးရောင်အတံကတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် ပြီးတော့ အရေပြားဖြတ်မထားဘူး။ သူ့ဟာကို အသာနောက်ပြန်ဆွဲပြ တော့ ထိပ်ဖူးကလေးက ခွက်ကလေးမှောက်ထားသလိုပဲ။ သူကတံတွေးအနည်းငယ် ဆွတ်ပေးဖို့ပြောပြန်တော့ ခေါင်းကိုနည်းနည်းငုံ့ပြီး တံတွေးထွေးပေးရင်း အသာဆက်ပြီးလက်ကစားပေးမိရတယ်။ ပူပူနွေးနွေး မာထောင် နေတဲ့ ကိုရွှေလီးကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင် အပေါ်အောက်ဘယ်ညာကစားပေးမိတော့ မာသထက်မာလာတာ ဒီရေအလားပါပဲ။
အနီးအနားမှာ ရေလည်းမရှိ ချောဆီအဖြစ်သုံးနိုင်တဲ့အရာလည်းမရှိတော့ သူ့ငပဲကိုကိုင်ရတာ ချောမွေ့ဖို့အတွက် တံတွေးများများထည့်ပေးရတာပေါ့လေ။ သူ့ဒစ်အရေပြားကို အသာဆွဲလှန်တံတွေးကို များများထည့်ဖို့ခေါင်းကို အသာငုံ့ချလို့ ပါးစပ်လည်းသာဟလိုက်ရော မထင်မှတ်ထားတာကို သူလုပ်လိုက်တာ ဝေါ့ကနဲတောင် အံမိတော့ မလိုဖြစ်သွားရသေးတာ ကျွန်တော့်မှာ။ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို သူ့လက်နဲ့အသာကိုင်ပြီး အပေါ်ကဖိချလိုက်တာ သူ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံး အဆုံးထိဝင်သွားတာ အာခေါင်ကိုထိရောလေ။ သူ့ဒစ်တချောင်းလုံး အာခေါင်ထဲရောက် နေချိန်မှာ သတိထားမိတာက အသားချောင်းတစ်ချောင်းကို ငုံစုပ်ရတာဟာလည်း ဖီးလ်ကောင်းမှန်း သိလိုက်ရ ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပေးတာ သူဖီးလ်အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ နောက်တစ်ခါလောက် လုပ်ပေးပါလားတဲ့။
camp ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းတေစ်လျှောက်ဖြစ်စဉ်မှာ ဒီအချိန်ပိုင်းလေးကို အနှစ်သက်ဆုံးပါပဲ။ ပန်းနုရောင် အသားချောင်းကို အသာဆုပ်ကိုင် အဦးဆုံးသော dick sucking ကိုစလုပ်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ထိပ်အရေပြားကြား လေးထဲ လျှာနဲ့မရဲတရဲထိုးကြည့်လိုက် ထိပ်ပိုင်းလေးကိုငုံကြည့်လိုက်နဲ့ အစပျိုးရတာပေါ့ ကျွန်တော့်မှာ။
သူ့ငပဲကို ပြုစုနေစဉ်မှာ သူဟာ ကျွန်တော့်ကျောပြင်တွေ၊ ဆံပင်တွေကို အသာအယာပွတ်သပ်ပေးရင်း အရသာကိုလည်း ခံယူနေလေရဲ့။"မင်းနဲ့တွေ့ရတာ ပြီးတော့ ဒီလိုကြုံရတာ ငါအရမ်းပျော်တယ်ကွာ"တဲ့။ စကားတွေသာဆိုနေတာ သူကျွန်တော့်ဒစ်ကို ထိကိုင်ဖို့ လုံးဝကိုမကြိုး စားတာတော့အမှန်။ သူ့ဒစ်ကိုသာ ကောင်းကောင်းဆက်ပြုစုစေချင်တော့တာ။ ဟိုအရင်က dick sucking အတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့ အခုတော့ ဒီဘဲချောချောရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ဆိုတာ သိလာပါပြီ။
ထိပ်ပိုင်းလေးကို ငုံစုပ်ပေးရာကနေ တစ်ဝက်လောက်ထိရှေ့တိုးနှောက်ငှင် ထိပ်ဝလေးကို လျှာနဲ့သပ်။ နောက်ထိပ်ပိုင်းလေးပြန်ရောက်လာလိုက် အဆုံးထိငုံချလိုက် နှုတ်ခမ်းလေးကို စုလိုက် ကျယ်လိုက်ကစား ပေးလိုက်တာ အကြောလေးတွေ ခပ်တင်းတင်းဖြစ်လာသလို တဆတ်ဆတ်လည်း တုန်လာရပြီပေါ့။ " ပြီး......ပြီးတော့မယ်။" ဆိုတော့ ပါးစပ်ကနေအသာချွတ် လက်နဲ့ အသာဆက်ကစား ပေးလိုက်တာ သူ့ရေပြွတ် ရဲ့ ပန်းထုတ်မှုဟာ ခပ်လှမ်းလှမ်းတောင်ရောက်တဲ့အထိ ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲပဲ အများကြီး။ ကျွန်တော်သည် လည်း သူ့ကို sucking ပေးနေစဉ်မှာကိုပဲ လက်ကို အငြိမ်မပေးခဲ့တာ သူလည်းပြီး ကျွန်တော်လည်းမရှေး မနှောင်းပြီးသွားတာဗျ။ နှစ်ဦးသား တစ်ပြိုင်နက်နီးပါး ပြီးတာဆိုတော့ ဖီးလ်လာတာ ကတစ်မျိုးပေါ့လေ။
ဆေးစရာရေသွားမရှာချင်တော့ လက်ကိုင်ပုဝါတွေကို အသုံးပြုပြီး သန့်ရှင်းပစ်လိုက်ရတာပေါ့။ အ၀တ်တွေပြန် ၀တ်ပြီးတော့ လမ်းအဆုံး camp ရှိရာကို ဆက်လျှောက်လာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ camp ရောက်တော့ ကိုယ့်ဌာနီဆီ ကို ကိုယ်စီပြန်ခဲ့ ကြတယ်။ အဲဒီကတည်းက အဲဒီကစပြီး သူ့ကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ ဘယ်ဆီကိုထွက်ခွာသွား သလည်းမသိရ။ လိုအပ်တယ်လို့ခံစားရမိတိုင်း သူ့ကိုဖွေရှာမိတာအမော။ ဒါပေမဲ့.... သူမရှိတော့ဘူး။ ဟင်း..... ဒါဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အဦးဆုံးအတွေ့အကြုံပါပဲ။ နောက်တော့....အဲဒီနောက်တော့ ဒီလိုအရသာ မျိုးရချင် နေမိတယ်..လုပ်ချင်နေမိတယ်...လုပ်ဖြစ်ဦးမယ်ထင်တယ်။ သေချာတာပေါ့......အသင့်ပဲ။ ဦးဆုံးအတွေ့အကြုံ မှာပဲ စိတ်ကျေနပ်မှုရဖို့ ဘယ်လိုပေးရမယ် ဘယ်လိုယူရမယ်ဆိုတာ သူသင်ပေးသွားခဲ့တာ....။ My First time was great!
Posted by Alex Aung at 6:39 PM
man that is good story